KPAL Firimu yakatanga kubva kuAmerica JW kambani yemafirimu. JW Firimu kambani yakagara yakazvipira kuputira zvinhu R & D uye kutengesa, simba rayo rehunyanzvi muindastiri rine makwikwi akasimba Iyo kambani inovandudza uye inoongorora zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinogona kuiswa seyakazara, zvinobatsira mukusimudzira kweindasitiri, uye inovimbisa kuratidza zvirinani kukosha ruzivo kune vatengi vane yakakwira mashandiro zvigadzirwa uye pro-yezvakatipoteredza tekinoroji.
Semutengesi anotungamira wepasi rose we thermoplastic polyurethane (TPU), KPAL FILM yakafambira mberi pendi kupera uye tekinoroji yekuchengetedza pamusoro. Iyo yepamusoro-yekuita TPU yeKPAL Firimu inoiswa munzvimbo dzakasiyana senge yekunamira yekumachina muchina, iyo mota indasitiri uye yemagetsi inoratidzira skrini, nepo KPAL Firimu iri zvakare imwe yemakambani makuru eisina-yakavharwa TPU nependi. Dziviriro firimu mune yepasirese mota mushure mekutengesa.
Nechekuita kwepamusoro, tekinoroji yepamberi uye mhando yepamusoro yeKPAL chigadzirwa, KPAL Firimu rave zita rakakurumbira reiyo yakajeka firimu munyika. Kwemakore, iyo mhando inotakura mutengi kuzivikanwa uye kuvimba, zvinoenderana neyakaomarara uye hunyanzvi hunyanzvi hunhu, vanhu-vakatarisana nebasa pfungwa, tariro yekuve yepasi rose kirasi pendi yekudzivirira firimu brand.
Iine nyowani yepamusoro-chaiyo michina yakadai seSOLT DIE Coating uye UV-kurapa, KPAL iri kutarisa mukuona iyo ingwara michina uye mhando yepamusoro PPF.
• KPAL inozivikanwa pasi rese yeMotokari Dziviriro Firimu, iyo yakatangwa muUnited States.
• KPAL inemhando dzakasiyana siyana dzekuchengetedza mota zvigadzirwa zvemufirimu; PPF (Paint Dziviriro Firimu), LPF (Chiedza Chekuchengetedza Firimu), RPF (Roof Kudzivirira Firimu), WPF (Windshield Kudzivirira Firimu), nezvimwe.
Zvigadzirwa zveKPAL zvakagadzirwa neyakaunganidzwa yekugadzira system uye yepamusoro R&D system. KPAL's yega tekinoroji inogona kuvhara TPU resin kuumbiridza, TPU firimu inogadzira uye kemikari inogadzira uye chaiyo yekupenda.
• Iyo TSP (technical Solution Inopa) Chikwata inotsigira dzakasiyana tekinoroji mhinduro kusanganisira kumisikidza, kugadzirisa uye kunetsa-kupfura kune vatengi.
Ningbo Chem-ndinoiitawo New Material Tec.Co., Ltd rakaumbwa
Ningbo Chem-plus yakagadzira iyo PPF muChina epamba musika
JW Firimu kambani yakavambwa
KPAL firimu brand yakatangwa
PPF yeKPAL firimu yakatanga kusona vatengi vekunze